Apôlinarisma - Wikipedia
Ny apôlinarisma dia fampianarana mikasika an'i Jesoa Kristy izay ilazana fa tsy manana fanahin' olombelona i Jesoa fa fanahin' Andriamanitra, dia ilay Teny (Logos) izay niditra tao amin' ny vatan' olombelona nisolo ny fanahy maha-olombelona. Ny vatan' i Kristy dia vatana ara-panahy sady nomem-boninahitra, ary tsy manana natiora roa ao amina persôna tokana i Jesoa. I Apôlinario (na Apôlinera), eveka tany Laôdikea tao Siria, no nanolotra izany fampianarana izany.
2 Ny fampianaran' i Apôlinario
3 Fanamelohana ny apolinarisma
Ny teny hoe apôlinarisma dia fanagasiana teny avy amin' ny anaran' ny tompon' ny fampianarana, dia i Apôlinario (latina: Apollinaris; grika: Άπολλινάριος / Apollinarios).
Ny fampianaran' i Apôlinario[hanova | hanova ny fango]
Ny Fiangonana ôfisialy dia mampianatra fa manana natiora roa i Kristy ka ny voalohany natioran' Andriamanitra fa ny faharoa natioran'olombelona ao amin'ny persôna tokana. Ny apôlinarisma kosa mandà ny fisian'ny fanahin'olombelona ao amin'i Kristy sady mihevitra an'i Kristy ho ilay hany Teny tonga nofo ao amin'ny vatan'olombelona. Azo fintinina amin'izao ny fampianaran'ny apôlinarisma: "Tokana ny natior' Andriamanitra Teny tonga nofo" (grika: μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη / mía phúsis toû theoû lógou sesarkōménē). Izany rehetra izany no fomba hitan' i Apôlinario hanoherany ny arianisma izay tsy manao an'i Jesoa ho Andriamanitra.
Fanamelohana ny apolinarisma[hanova | hanova ny fango]
Nohelohin'ny sinôda telo natao tao Rôma teo ambany fahefan'ny papa Damasio I ny fampianaran'i Apôlinario, dia ny sinoda natao tamin'ny taona 374/376 izay nanameloka an'i Apôlinario sy i Timôteo izay nilaza fa tsy manana fanahin'olombelona i Jesoa Kristy, fa ny Tenin' Andriamanitra no manetsika azy; sy ny sinôda tamin'ny taona 377 izay nanameloka ireo Apôlinarista sy Markelianista, izay sampan'ny Gnôstika; ary ny sinôda tamin'ny taona 378 izay nanamafy ny fanamelohana an' i Ariosy, i Sabelio, i Eonômio ary i Fotino. Tamin'ny taona 381 dia nohamafisina tao amin'ny kônsilin' i Kônstantinôpôly ny fanamelohana ny apôlinarisma.
↑ Nilaza i Ario na Ariosy fa ny Ray ihany no Andriamanitra fa tsy ny Zanaka na ny Fanahy Masina. (Jereo: Arianisma)
↑ Nampianatatra i Sabelio fa ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy masina dia fomba fiseho telon'ilay Andriamanitra tokana fa tsy persona telon'Andriamanitra. (Jereo: Sabelianisma)
↑ Nampianatra i Eonomio fa tsy misy fotoviam-pomba (natiora) eo amin'ny Ray sy ny Zanaka.
↑ Mandà ny fahatongavan'i Kristy i Fotino.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Apôlinarisma&oldid=1000778"
Voaova farany tamin'ny 27 Janoary 2021 amin'ny 14:26 ity pejy ity.